🥇 ▷ Nokia 7.2 wuxuu xaadiraa Geekbench oo leh qalab leh Snapdragon 660 ✅
Nokia 7.2 wuxuu xaadiraa Geekbench oo leh qalab leh Snapdragon 660
Nokia 7.2 waa taleefanka casriga ah ee cusub ee la filayo in lagu sii daayo dabayaaqada bishaan Shiinaha, iyada oo siidayn caalami ah loogu sameyn doono IFA bisha Sebtember.
Markii la filaayay furitaanka rasmiga ah, taleefanka waxaa lagu arkay Geekbench. Natiijada baaritaanka waxay muujineysaa faahfaahinta muhiimka ah ee ku saabsan waxyaabaha la soo koobey, oo ay ku jiraan processor-ka.
Shalay, aaladda waxaa loogu qiimeeyay “HMD Global Nokia 7.2”. Waxay ku shaqeysaa Android 9 waxayna leedahay 6 GB oo RAM ah. Waa inay jiraan xulashooyin kale oo loogu talagalay RAM, laakiin waa inay ahaato qaabeynta ugu sarreysa. Madaxweynihii ka horeeyay, Nokia 7.1, waxaa lagu dhawaaqay 3 GB oo RAM ah iyo 6 GB oo RAM ah.
Geekbench kuma xusna kumbuyuutarka, maadaama uu ku leeyahay “Daredevil” “Motherboard-ka”, lambarka taleefanka magaca. Si kastaba ha noqotee, celceliska saldhiggu waa 1.84 GHz. Waxaan isbarbar dhig ku sameynay aaladaha kale ee la tijaabiyay, iyo chipset-ka isku midka ah ee soo noqnoqda saldhigga waa Snapdragon 660.
Marka haa, Nokia 7.2 waxay la imaan doontaa qalabka loo yaqaan ‘Snapdragon 660 processor’, sida horey loo soo sheegay. Tani waa cusboonaysiin caddaalad ah, iyadoo la tixgelinayo in Nokia 7.1 ay ku qalabaysan tahay qalabka loo yaqaan ‘Snapdragon 636 processor’. Qalabka wuxuu dhaliyay 1604 dhibic imtixaanka hal-core iyo 5821 dhibcood oo ah imtixaanka aasaaska badan. Waxay u egyihiin Redmi Note 7, oo ku shaqeeya isla chipset.
Nokia 7.2 ayaa la sheegay inay leedahay saddex kamaradood gadaal oo ku yaal kiis wareeg ah. Qaabeynta kaamerooyinka lama oga, laakiin waxaan fileynaa inay leeyihiin muraayadaha ZEISS. Telefoonku sidoo kale waa inuu leeyahay muuqaal FHD + iyo scanner ah oo sawirka faraha ku dhejisan.
faallooyinka ay xoojisay HyperComments